Win an iPhone 12 Pro for 2021! | Grab MM
Win an iPhone 12 Pro for 2021!
၂၀၂၁ နှစ်သစ်အတွက် iPhone 12 Pro အသစ်စက်စက်လေး ကံစမ်းလိုက်ရအောင် Grab App ထဲက “Win an iPhone 12 Pro” challenge မှာ အခုပဲ ပါဝင်လိုက်ပါ။
Grab အက်ပ်ပလီကေးရှင်း ပင်မစာမျက်နှာပေါ်က Challenges ပုံကို နှိပ်ပါ။
GrabProtect ၂ကြောင်း စီးနင်း၊ GrabFood အော်ဒါ ၂ ခုနဲ့ GrabMart အော်ဒါ ၂ ခု ဇန်နဝါရီ လ ၃၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး မှာယူရပါမယ်။
Challenge တစ်ခုစီကို ခွဲဝေအသုံးပြုလို့ မရပါ။ Challenge တစ်ခုစီကို တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီအလိုက် ဖန်တီးထားတာကြောင့် တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ အက်ပ်ပလီကေးရှင်းထဲမှာ Challenge ကို ရရှိသူသာ မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Grab မှ အက်ပလီကေးရှင်းတွင်း သုံးစွဲသူများ Challenge ရရှိမှု မရရှိမှုကို ကန့်သတ်ခွင့် ရှိပါတယ်။
Challenge မှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်နေ့ မှ ၃၁ ရက်နေ့အထိသာ ဖြစ်ပါတယ်။
Challenge မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် Grab အသုံးပြုမှုများကို ထည့်သွင်းတွက်ပေးမှာ မဟုတ်ပါ။
GrabProtect ၊ GrabFood ၊ GrabMart အသုံးပြုမှုများသာ ဒီ Challenge မှာ အကျုံးဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကတ် သို့မဟုတ် ငွေသားဖြင့် ပေးချေမှုပုံစံကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Challenge အတွက် တစ်နေ့လျှင် ၈ ကြောင်းအထိသာ (သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိပါက မဖြစ်မနေ လိုက်နာရန် မဟုတ်ပါ)။
Challenge ‌အောင်မြင်သွားပါက သင့်အနေနဲ့ ကံစမ်းမဲမှာ အကျုံးဝင်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Challenge အောင်မြင်သူ Grab သုံးစွဲသူတိုင်းကို iPhone 12 Pro (128 GB ၊ Pacific Blue) ကံစမ်းခွင့် လက်မှတ်တစ်စောင်အဖြစ် သတ်မှတ်ကာ မဲနှိုက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Challenge ပြီးဆုံးအောင်မြင်သွားတဲ့ Grab သုံးစွဲသူများအနက် ဆုရရှိသူကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့မတိုင်မီ အကြောင်းကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုရရှိသူကို Grab မြန်မာရဲ့ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာမှလည်း ကြေညာပေးသွားပါမယ်။
Challenge အောင်မြင်ပြီး ရရှိသော rewards များမှာ ကံစမ်းမဲ လက်မှတ်အဖြစ်သာ သတ်မှတ်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။
Grab အနေနဲ့ မရိုးသားမှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိမရှိ ဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီးမှ Reward ကို ထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Grab ဝန်ထမ်းများ၊ မိသားစုဝင်များ ပါဝင်ခွင့် မရှိပါ။
ပြီးဆုံးသွားပါက နောက်ထပ် ပါဝင်လို့ မရပါ။
Challenge မှာ အချိန်ပြည့်သွားပါက (သို့) ဆု လက်ဆောင်ပေးအပ်ပြီးပါက ပြိုင်ပွဲကာလ ပြီးဆုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ Grab အပလီကေးရှင်းထဲ ပါရှိသော Grab ဝန်ဆောင်မှုများရဲ့ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များကို သဘောတူလက်ခံပါတယ်။ Reward များကို အသုံးပြုရမှာ တစ်ခုစီအလိုက် သတ်မှတ်ချက်များ ကွဲပြားပါတယ်။ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များကို reward တစ်ခုစီထဲမှာ ဝင်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီ Challenge မှာ ပါဝင်ခြင်းအားဖြင့် Grab မှ သင့်နာမည်နှင့် သင့်ဓာတ်ပုံကို ဆုရှင်ကြေညာသောအခါ အသုံးပြုရန် ခွင့်ပေးပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအချက်ကို သဘောတူညီမှု မရှိပါက သင်၏ ဆုကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် ဆုရှင်တစ်ဦးကို အလိုအလျောက် ရွေးချယ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Grab မှ သင့်အား ကြိုတင်အကြောင်းကြားမှု မပြုလုပ်ဘဲ ဒီပြိုင်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်အချိန်မဆို စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များရဲ့ ဘယ်အချက်အလက်ကိုမဆို ‌ပြောင်းလဲ၊ ပြင်ဆင်၊ ဖြုတ်ခွင့်ကို အပြည့်အဝ ရရှိထားပြီး သင့်အနေနဲ့ ‌ပြောင်းလဲမှုများကို သဘောတူညီလက်ခံပါတယ်။
Challenge နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုကိစ္စရပ်မဆို Grab ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်သာ အတည်ဖြစ်ပါတယ်။ Grab အနေနဲ့ သင် သို့မဟုတ် တခြားသူတစ်စုံတစ်ဦးမှ အမြတ်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ မတော်တဆပျက်စီးမှု၊ လက်ငင်းပျက်စီးမှုများ သို့မဟုတ် Challenge နဲ့ ဆက်စပ်၍ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ ရှိပါတယ်ဟု ‌တောင်းဆိုမှုအပေါ် ‌ဖြေရှင်းပေးရန် တာဝန်မရှိပါ။
Grab အနေနဲ့ မူလဆုကို မ‌ပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်ပွားခဲ့ပါက ဆုကို တူညီတဲ့ တန်ဖိုးရှိ ဆုတစ်ခုခုနဲ့ အစားထိုး‌ပေးနိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။
ဆုထုတ်ယူအသုံးပြုရာတွင် Grab အနေနဲ့ အငြင်းပွားဖွယ်ရာများကို ကာကွယ်ရန် ဆုရှင်အား အတည်ပြုဖို့ အထောက်အထား တစ်စုံတစ်ရာ ‌တောင်းခံကောင်း ‌တောင်းခံနိုင်ပါတယ်။
ဆုများကို သတ်မှတ်ထားသော ကာလအတွင်းသာ အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သက်တမ်းကျော်လွန်သွားပါက ဆုကို အဆုံးရှုံးခံရမှာ ဖြစ်ပြီး နစ်နာကြေး ‌တောင်းခံခွင့် မရှိပါ။
ခြွင်းချက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိပါက ဆုများကို ‌ငွေသား သို့မဟုတ် credit မည်သည့် ပုံစံနဲ့မဆို လွှဲပြောင်းခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်းများကို ခွင့်မပြုပါ။
စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဉပဒေများအတိုင်း ပြဌာန်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး အငြင်းပွားဖွယ်ရာ တစ်စုံတစ်ရာ ‌ဖြစ်ပွားခဲ့ပါက တရားရုံးများတွင် တရားစီရင်ခွင့် ခံယူနိုင်ပါတယ်။